“Guul darro ayuu nooga dhigan yahay bar-barihii aan la galnay South Africa.”. Kabtanka xulka Brazil Neymar – Gool FM
“Guul darro ayuu nooga dhigan yahay bar-barihii aan la galnay South Africa.”. Kabtanka xulka Brazil Neymar
Byare August 5, 2016
(Brazil) 05 Agoosto 2016. Kabtanka xulka Brazil ayaa qiray in bar-barihii goolal la’aanta ay la galeen xulka South Africa kulankoodii furitaanka ciyaaraha Olympicada ay u dareemeen sida guul darro oo kale.
Xulka sanadkan marti galinayay ciyaaraha Olambikada adduunka ee Brazil ayaa inta badan ciyaarta maamulanayay laakiin waxay ku guul darreysteen inay gaaraan shabaqa xitaa haddii kaarka cas laga siiyay xulka reer Africa xiddigooda Mothobi Mvala kaddib markii uu qaatay kaarkii labaad ee jaalaha.
“Innaga ahaan, bar-baraha waa inoo guul darro, kooxdu waxay u ciyaartay inay guuleysato, laakiin waan garaneynaa masuuliyadeena, weli waxaan wajihi doonnaa dhibaatooyin,”. Neymar ayaa sidaa yiri.
“Waxaan dooneynaa inaan garano sida loo adkaado, laakiin waan is dajin doonaa waana sixi doonaa waxyaabaha waqtiga ugu dhow ee ugu macquulsan, si aan kulan fiican u yeelan karno ciyaarta axada aan kala hortageyno dalka Ciraaq.
“Kulanka ugu horreeya had iyo jeer waa kan ugu adag sababtoo ah wal-walka bilowga tartanka, waxaana aaminsanahay in wal-walka ugu dambeyn uu wax yar na dhaawacay.”.
Radamel Falcao oo la xaqiijiyay inuu muddo garoomada ka maqnaan doono kaddib...
GOOGOOSKA: Viking vs Arsenal 0-8, Tottenham vs Inter Milan 6-1